Jubaland oo War soo saartay - Awdinle Online
Jubaland oo War soo saartay
Maamulka Jubaland ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay abaaraha ka taagan gobolka Gedo, iyada oo dirtay baaq caalami ah oo ku saabsan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku nool gobolkaas.
Gobolka Gedo waxa uu ka mid yahay deegaannada ay saamaysay abaarta, waxaana qaar ka mid ah xoola-dhaqatada ay bilaabeen in ay u hayaamaan deegaanno kale si ay biyo iyo baad ugu helaan xoolahooda.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadeedka kaso baxay Maamulka Jubbaland.
Dowlada Jubbaland waxay aad uga walaacsanahay xaalada bani”adanimo ee ka taagan gobolka Gedo taas oo isugu jirta Abaar, Amni daro iyo Saameynta cudurka safmarka ah ee Covid-19 oo fara ba’an ku haya qaar kamid ah bulshada ku nool degmooyinka Gobolka Gedo iyada oo illaa hadda wax gargaar caalami iyo mid maxalli uu san midna gaarin Bulshada Gobolka Gedo waxay wajahayaan xaalad nololeed iyo mid caafimaad darro aad u daran taas oo maalinba maalinta ka danbeysa ka sii dareysa.
Gobolka Gedo oo ay bulshadiisu ku tiürsanahay dhaqashada xoolaha iyo beeraha ayay abaartani si ba’an u saameysey qaarkoodna ku kaliftay inay ka hayaamaan degaankoodii una qaxaan deegaano kale. Abaarta gobolka ku habsatey ayaa ka dhalatey xaalada roob la’aanta iyo wax adeeg bulsho ah oo haba yaraatee aan ka jirin guud ahaan gobolka Gedo. Sidaas darteed Dowlada Jubbaland waxay ugu baaqeysaa Dowlada Federaalka Soomaaliya, Hay’adaha Qaramada Midoobey, Hay’adaha Maxalliga iyo kuwa caalamiga ah, Samafalayaasha
Soomaaliyeed iyo guud ahaan cidkasta oo kaalin ka gaysan garta gurmadka bulshadaas xaaladaadag wajaheysa in sida ugu dhakhsaha badan loogu gurmado xaaladana sidii ay uga bixi lahaayeen loogu garab istaago.
Dowlada Jubbaland waxay gudi u saareysaa xaalada ka soo cusboonaatey gobolka Gedo kuwaas oo wadada ugu haboon ku gaarsiin doona gargaarka Dowlada iyo tabarrucaadka shacabka ku nool Jubbalanad ee jecel inay walaalahood gobolka Gedo u gurmadaan.
Previous articleSababtii Maanta ay u istaagtay Shaqada Garoonka Aadan-Cadde oo la ogaaday
Next articleDowladda & Midowga Musharixiinta oo ka heshiiyay waqtiga la qabanayo banaanbaxa